कथाः बार्दलीको एउटा अनुहार
अरु बिसौनीमा दुई मिनेट रोक्ने बस ओखारपौवामा दस मिनटभन्दा पनि बढी रोकिन्थ्यो । यात्रुहरू ओर्लने र चढ्ने काम सकिएपछि पनि चालक गाडी कुदाउने सुर नै गर्दैनथ्यो । नयाँ नयाँ भएको हुनाले सहचालक चालकसँग खासै कुरा गर्दैनथ्यो । ऊ एकोहोरो बसको छेउ पिटिरहन्थ्यो । यात्रुहरू केहीबेर चुप लाग्थे, तर केहीबेरपछि रोकाइ असामान्य लागेपछि कराउने थाल्थे, “गुरुजी, जौँ न हो, अब त । ढिलो भयो ।”
अनि बल्ल चालक स्टेरिङ घुमाउन थाल्थ्यो । काठमाडौँबाट त्रिशूली जाँदा होस् वा त्रिशूलीबाट काठमाडौँ, ओखरपौवाको यस बिसौनीमा उनीहरूको रोकाइ सधैँ नै लामो रहन्थ्यो ।
केही दिनपछि सहचालक अलि पुरानो भएपछि ड्राइभरसँग अलि नजिकिन थाल्यो । चालक–सहचालकहरूको बीचमा समान्यतः सुनिने हाँसोठट्टामा पनि सरिक हुन थाल्यो । मन खुल्दै गएपछि र अलि आँट आएपछि एक दिन उसले ओखरपौवाको यस असामान्य रोकाइका बारेमा चालकलाई सोध्यो ।
“अहिले भन्दिनँ । कुनै दिन भनौँला ।”
यत्तिकैमा एक दिन त्रिशूलीबाट काठमाडौँ आउँदा उनीहरूको बस रानीपौवा पुग्दानपुग्दै खाली भयो । तीनचार जना यात्रु लिएर ओखरपौवा आए, र बिसौनीमा बसे । पछिपछि त्रिशूलीतिरैबाट काठमाडौँ आइरहेको ‘त्रिशूली यातायात’ को अर्को बस थियो । जब त्यो बस रोकियो, चालकले चालकसँग केही कुरा गर्यो । अनि, यत्रुहरूतिर फर्केर भन्यो, “तपाईंहरू त्यो बसमा जानू ल । भाडा लाग्दैन ।”
चार जनामध्ये तीनजना आ–आफ्ना झोला लिएर निस्किए, र पछाडिको बसमा गएर बसे । चौथो यात्रु चालकतिर फर्कियो र करायो, “यसो गर्न पाइन्छ? काठमाडौँ पुर्याउँछु भनेर हालेको होइन अघि?”
“सरी दाइ । पेसेन्जर नै भएनन् । कुरो एउटै त हो । अर्को गाडीमा पनि सिटमै राख्ने हो । भाडा लाग्दैन । हाम्रै कम्पनीको गाडी हो,” उसले मिजासिलो पारामा भन्यो ।
“यही भएर मलाई यो डाइबरका जातको विश्वासै लाग्दैन । भनेको कहिल्यै पुर्याउँदैनन् । ट्याममा कहिल्यै हिँड्दैनन् ।”
अन्तिम वाक्य बर्बराउँदासम्म ऊ पछाडिको गाडीमा चढिसकेको थियो । उसैले गर्दा त्यो गाडी दुई मिनेटजति ढिलो हुनपुग्यो । अन्य यात्रुले घुरेर हेरेपछि ऊ केही मत्थर भयो, र एउटा सिटमा गएर थचक्क बस्यो । गाडी काठमाडौँतिर हुइँकियो ।
पछाडिको गाडी हिँडेपछि चालकले सहचालकलाई आफूनजिक बोलायो र छेवैको सिटमा बस्न भन्यो । आजसम्म त्यो सहचालक चालकको यति नजिक कहिल्यै आएको थिएन । उसलाई केही संकोच, कही असञ्जताको अनुभव भयो । तैपनि, ऊ चालकको नजिक गयो, र सचेतताका साथ उसले नछुने गरी केही दूरीमा बस्यो ।
चालकले दायाँतिरको झ्यालबाट बाहिरतिर इशारा गरेर भन्यो, “उः त्यहाँ हेर् ।”
सडकको उत्तरतिर, करिब बीस मिटरजतिको दूरीमा एउटा नीलो चूना लगाएको, काठको दुई तले घर थियो । सडकपट्टि नै फर्र्किएको बार्दली पनि देखिन्थ्यो । बार्दलीमा बसेर दक्षिण हेर्दा सडकको सबै गतिविधि मज्जासँग देख्न सकिन्थ्यो । बार्दलीको आडमा लहरै सुकेका मकै खोसेलैसँग झुण्डाइएको थियो । सुकेको सयपत्री पनि झुण्ड्याइएको थियो कताकती । बार्दलीको एकछेउमा मान्द्रा–गुन्द्री बेरेर राखेका । कताकति लुगाफाटा सुकाउन राखेका पनि देखिन्थे ।
चालकको इशारा पाएपछि सहचालकले पनि त्यसै घरतिर हेर्यो । बार्दलीको बीच भागमा, काठको आड लिएर एउटा सुन्दर अनुहारले उनीहरूतिरै हेरिरहेको उसले देख्यो । चालकले इशारा गरेको त्यही अनुहार हो कि अरु नै केही चीज हो भनेर ठम्याउन नसकी केही असमञ्जसताका साथ उसले पुनः चालकतिर पुलुक्क हेर्यो । चालकका आँखा अपलक त्यसै अनुहारतिरै केन्द्रित थिए । सहचालकलाई पक्का भयो, उसको इशारा त्यही दिव्य अनुहारतिरै थियो ।
कुनै कृत्रिम सृङ्गार थिएन त्यस अनुहारमा । एउटा निर्दोषिता आफैँमा सृङ्गार बनेर पोतिएको थियो गालाभरि । चञ्चल आँखा, अपलक सडकतिर हेरिरहेका थिए । बेलाबेला झुक्थे भुइँतिर । जबजब ती झुक्थे, ती दुई पुरुषलाई लाग्थ्यो, मध्यदिनमा रात परेको छ पासाङ ल्हामु शेर्पा मार्गमा, र अब त्यसै रातको कालिमाले उनीहरूलाई खाइदिनेछ । तर जब बार्दलीमा रहेका ती आँखा पुनः उठ्थे र झिम्झिमाउँथे, लाग्थ्यो, भर्खरै उज्यालो भएको छ, एउटा एउटा घाम उनीहरूका आँखामा बास बस्न आइपुगेको छ । लाग्थ्यो, आकाशको घामको उज्यालो देख्न मनको घाम पनि झुल्कनुपर्छ, चम्कनुपर्छ ।
“गुरु, कुरो के हो?” सहचालकले सोध्यो ।
“कुरो के हो, त्यो तँलाई पनि थाह छ, मलाई पनि । कुरो त्यही हो ।”
सहचालक फिस्स हाँस्यो । तर चालकको आवाजमा गाम्भीर्य थियो । त्यसैले ऊ चुप लाग्यो, र पुनः केन्द्रित भयो बार्दलीका ती दुई आँखामा ।
यसरी कसैलाई हेरिरहनु शोभनीय कुरा थिएन । त्यसैले, कसैले शङ्का नगरोस् भनेर चालक घरि अगाडिको सिसा पुछेजस्तो गथ्र्यो, घरि चुरोट सल्काएर तान्थ्यो, र घरि सिसा खोलेर “हाक् थु” गरेर भैँतिर थुक्थ्यो । अनि फेरि केन्द्रित हुन्थ्यो तिनै आँखामा ।
सहचालकले ध्यान दिएर हेर्यो । बार्दलीका आँखा पनि घरिघरि जुध्न आइपुग्थे चालकका आँखासँग । उसले बुझ्यो, बिना शब्द पनि त्यहाँ संवाद भइरहेको थियो आँखाहरूको, विनिमय भइरहेको थियो मायाको । उसलाई पहिलोपल्ट लाग्यो, मायाका बातहरू शब्दबिनै पनि पोखिन्छन् । एउटा मीठो असमञ्जताले उसको मुटु अलिकति टोकेर गयो ।
एकछिनपछि उनीहरूले देखे, अर्को एउटा अनुहार बार्दलीमा आयो र एक मिनेटपछि ती दुवै त्यहाँबाट अलप भए । एक मुठ्ठी अँध्यारो घोप्टियो चालकको अनुहारमा ।
“बस् । अब जाने काठमाडौँ । पल्लो स्टोपबाट पेसेन्जर हालौँला ।”
गाडी गुड्यो । चालकले मन्द गतिमा गीत बजायोः आँखाको निँद खोसी लाने, हृदयको तरङ छोडी जाने । तिमीलाई के सजाय दिऊँ…”
महिनौँसम्म बार्दलीका एक जोर निर्दोष आँखा र गाडीभित्रका दुई जोर जिज्ञासु आँखाको मौन संवाद चलि नै रह्यो । समयसँगै लाग्न थाल्यो, बार्दलीका ती आँखा बसको चालकमा भन्दा सहचालकमा बढी केन्द्रित रहन्थे । उमेरले सहचालक “मने” निकै कान्छो थियो चालकभन्दा, र उसको फुल्दै गरेको बैँस भर्खर बस्न लागेका जुँघाका रेखीको रूपमा प्रष्फुटित भइरहको थियो । ऊ पनि पहाडले आफ्नै हातले कुँदेको ठिटो, भर्खर पाकेका असारे आरुजस्ता देखिने आकर्षक गालाको लालिमाले अत्यन्तै सुन्दर देखिन्थ्यो ।
एकदिन, ओखरपौवाको त्यसै स्टपबाट गाडीमा एक जना अधबैँसे यात्रु चढे । गाडी त्यस स्टपमा नआइपुग्दासम्म ती यात्रु त्यसै घरको आँगनमा थिए । चालकले लख काटे, उनलाई त्यस घरको बारेमा सबै थाह छ ।
निकै भीड थियो गाडीमा । सिट कतै थिएन । चालकले ती यात्रुलाई आफूनजिक बोलाए र छेवैको सिटमा जसोतसो राखे । पल्लो स्टपमा पुगेपछि केही यात्रु ओर्लिए र ती नयाँ यात्रु अलि सजिलोसँग बसे । अब उनीदुईबीच कुराकानी सुरु भयो । नजिकका केही यात्रुले सुने हुन्, तर उनीहरूले खासै मतलब राखेनन् । सहचालकले लख काट्यो, त्यहाँ केही गम्भीर वार्तालाप हुँदैछ । तर उसको दायित्व भनेको “काठमाण्डु, काठमाण्डु” भनेर कराउनु, भाडा उठाउनु, यात्रु चढाउनु र झार्नु, झोला र बोराहरू ओराल्नु र उकाल्नु थियो । ऊसँग त्यो वर्ता सुन्ने सुबिधा र समय थिएन ।
भोलिपल्ट चालकले ओखरपौवामा पुग्न लाग्दा सोधे, “ओखरपौवा झर्ने छ ?” कोही बोलने । उनले गाडी नरोकिकन त्यो बिसौनी कटाए । सहचालकलाई आश्चर्य लाग्यो । ऊ त्यस गाडीमा हिँड्न थालेदेखि पहिलोपल्ट यस्तो भएको थियो । तर उसले कुनै प्रश्न सोधेन ।
साँझ त्रिशूलीबाट काठमाडौँ फर्कंदा त्यस बिसौनीमा कुनै यात्रु प्रतीक्षारत थिएन । बिसौनी पुग्नैलाग्दा चालकले सहचालकलाई पुनः सोधे, “झर्ने छ?” उसले यात्रुहरूलाई सोधेर भन्यो, “छैन ।” गाडी राकिएन । सहचालकले भने पुलुक्क हेर्न भ्यायो । त्यो निर्दोष अनुहार बार्दलीमै थियो । ती आँखा गाडीतिरै हेरिरहेका थिए । उनी दुईका आँखा जुधे ।
यो क्रम केही समय चलेपछि एक दिन चालकले एक्कासि त्रिशूली यातायातको बस नकुदाउने घोषणा गरे, र यातायात समितिमा जानकारी दिए । समितिसँग अरु पनि चालक थिए, समितिलाई खासै फरक परेन । तर त्यो सहचालक केटो बिलखबन्दमा पर्यो । यहाँ गाडी, ड्राइभिङ र जागिरको मात्रै कुरा थिएन । कथामा थुप्रै नयाँ र रहस्यपूर्ण अध्यायहरू थपिँदैथे । उसको चालकको र उसको मुटु गएर एउटै गुलाफको वरिपरि अल्झिरहेका थिए । त्यसैले, उसको चालक फगत अर्को एउटा ‘गुरुजी’ थिएन उसका लागि । उनी दुई एउटा एउटा भोक थिए, एउटा एउटा तिर्खा थिए, र त्यस भोक र तिर्खाको भाषा केवल उनीहरूमात्रै बुझ्दथे । यसले मुटुहरू कसेको थियो । प्रतिस्पद्र्धाको लेशसम्म पनि थिएन सहचालकमा, यद्यपि यसलाई थाह थियो, पछिल्ला दिनहरूमा बार्दलीको त्यो अनुहार उसलाई बढी हेरिरहेको थियो, खोजिरहेको थियो । तर पनि, उसले समुद्रभित्रभित्रै विराट बन्दै गरेको उसका गुरुको प्रेमलहरीलाई आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्ने निधो गरेको थियो । ऊ त्यस सम्बन्धलाई मूर्त रूप दिनमा आफू सहयोगी रहनेमा कृतसङ्कल्पित थियो । तर यो पनि सत्य थियो, उनीसँग उसका आँखा जुध्दा उसलाई बिजुलीको तरङ्गले शरीरमा झट्का दिएजस्तो केही भने अवश्यै हुन्थ्यो ।
तर आफ्नो गुरुको राजीनामाको घोषणाले उसलाई नराम्रोसँग हल्लायो । कसैले उसको छाती चिरेर मुटु जबरजस्ती चुँडेर लगिदिएजस्तो लाग्यो । उसले सहरमा धेरै देखेको थियो चालक र सहचालकको सम्बन्ध, जो कटुता, गालीगलोज र हेपाइमै आधारित रहन्थे । आखिर, ऊ त्यस्ता धेरै चालक थोत्र्याएर त्यस बसमा आइपुगेको थियो । उसले गाडी लाइनमा हिँड्न थालेपछि जिन्दगीमा पहिलोपल्ट एउटा संवेदनशील मुटु भएको चालक पाएको थियो, जसले उसलाई कहिल्यै गाली गरेन, आफैँसँग राख्यो, सुखदुःख बाँड्यो, हृदयका अन्तर्कथा सुनायो, र प्रेमपूर्ण अभ्यासबाटै गाडी गुडाउन सक्नेसम्म बनायो । अब उसलाई थाह थियो, यस्तो चालक उसले जिन्दगीमा कहिल्यै पाउने छैन ।
“म पनि हजुरसँगै जाने । हजुर जुन गाडी कुदाउनुहुन्छ, म पनि त्यसैमा काम गर्ने,” उसले घुर्की लायो ।
“मने, गाडी नै कुदाउनु थियो भने त मैले छँदाखाँदाको गाडी किन छोड्थेँ? भन् त? अब म यो काम गर्दिनँ । म विदेश जान्छु ।”
“हिजोसम्म केही कुरै थिएन । एक्कासि यो कसरी भयो?”
“हेर् । घरबाट बुवाको फोन आएको थियो । घरमा मेरा दुई दिदी अविवाहित हुनुहुन्छ भनेर मैले तँलाई भनेकै थिएँ नि । दुवै दिदीहरूको बिहे निस्क्यिो रे । तँलाई थाहै होला, दुईदुईवटा बिहेको खर्च कति हुन्छ । बुवाले जमिन बन्दकी दिएर पैसा निकाल्नुभाको छ । हेर्, मेरो यो जागिरले त्यो जमिन उकास्न पुग्छ? पुग्दैन । त्यसैले म विदेश नगई हुँदैन । मैले यो जागिर बाध्यतामा छोडेको । कुरा बुझ् न, लाटा ।”
चालकले माथि आकाशतिर हेर्यो । विभिन्न आकृतिमा बादल उडिरहेको थियो । आकृतिहरू बन्दै भत्कक्दै गरिरहेका थिए, पलपल बद्लिरहने मान्छेका अठोट जस्तै ।
“म पनि हजुरसँगै जाने ।”
सन्नाटा । केहीबेरको मौनतापछि चालकले भन्यो, “हेर्, तँ छँदाखाँदाको काम नछोड् । तँ अब मज्जाले गाडी चलाउन सक्छन् । लाइसेन्स ननिकाल्दासम्म सहचालकै बस् । लाइसेन्स बनेपछि आफैँ चलाइहाल्छस् नि ।”
“म हजुरसँग काम गर्ने ।”
“यसो गर् । तँ मेरो फोन नम्बर राख् । लाइसेन्स् पाएपछि मलाई फोन गर् । म कुनै हाकिमको निजी गाडी कुदाउने व्यवस्था मिलाइदिन्छु । तैँले लाइसेन्स यसै महिनामा पाउँछस्, तर मलाई विदेश जान अझै दुईचार महिना त लाग्छ नै । म यहीँ त हुन्छु, लाटा ।”
निकैबेर सोचेपछि मनेले भन्यो, “हुन्छ । तर, म गाडी त्रिशूलीकै बाटोमा चलाउँछु ।”
केही समयपछि मनेले लाइसेन्स पायो । तर, तत्काल उसले गाडी पाएन । फेरि पनि सहचालकै बनेर बस्न उसको मनले दिएन । पुरानो चालकलाई फोन गर्ने कोशिस पनि गर्यो, तर फोन लागेन । ऊ निराश भयो ।
ऊ धादिङको केटो । घरमा बाबुलाई फोन गर्यो । बाबुले नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरसँग अनुनय गरे । मेयरले आफूले स्थापना गरेको एउटा गैरसरकारी संस्थाको गाडी कुदाउने काममा लगाइदिए ।
जिल्लाभित्रै गुडिरहनुपर्ने काम थियो । धादिङका डाँडापाखा, र काठमाडौँ–मलेखुको सडकखण्ड उसको दिनचर्या बन्यो । ऊसँग विकल्प थिएन । त्यसैले, यस काममा लागि पर्यो । तर पटकपटक उसको मन पासाङ ल्हामु राजमार्गमै गुड्थ्यो, ओखरपौवामा अडिन्थ्यो, उत्तरतिर हेथ्र्याे, र बार्दलीबाट दक्षिणतिर हेरिरहने तिनै निर्दोष एक जोडी आँखामा गएर अल्झिन्थ्यो । दिनभरि गाडीसँगै अल्मलिन्थ्यो । राति निद्रा पर्दैनथ्यो ।
करिब छः महिना बितेपछि उसले धादिङमा मन थाम्न सकेन । उसले एउटा बहाना सोच्यो र मेयरलाई भन्यो, “सर्, म काठमाडौँ नगई भएन दुई दिनको लागि । मेरो मिल्ने साथीको बिहे छ । म दुईदिनपछि फर्किहाल्छु ।”
जिल्लामा खासै काम पनि थिएन । मेयरले स्वीकृति दिए । उसले हत्त न पत्त काठमाडौँको बस समात्यो, र बालाजु पुग्यो । त्रिशूली यातायातको अफिसमा उसको चिनजानका केही त थिए नै । उनीहरूसँग उसले मनको कुरा बिसायो ।
“तँ ठीक टाइमका आइस्, मने । चारवटा नयाँ बस थपेको छ । तर तँलाई नयाँ बस त नदेलान् । पुरानो चैँ पक्कै दिन्छन् । जा, ईश्वर प्रधानसँग कुरा गरिहाल्,” टिकट काउन्टरमा बस्ने श्रीराम पाण्डेले सुझाव दिए । मनेले पडताल गरेर थाह पायो, ईश्वर प्रधान बालाजुमै छन्, र पर बाइपासमा उसको भाइले खोलेको पवन पुस्तक पसलतिर गएका छन् ।
मने वायुवेगले दौड्यो । नभन्दै, उसले ईश्वर प्रधानलाई पवन पुस्तक पसलमै भेट्यो । पहिले त्रिशूली यातायातमै काम गरेको, बाटो राम्ररी थाह भएको र अहिले आफू अनुमतिपत्र प्राप्त एक कुशल चालक बनेको जिकिर उसले गर्यो । मेयरको गाडीसम्म कुदाएको थाह पाएपछि ईश्वरलालले भने, “म तिमीलाई नयाँ गाडी दिन्छु । भोलि आठ बजे तल काउन्टरमा आउनू ।”
मनेलाई बीच सडकमै उफ्रिऊँ जस्तो लाग्यो । सर्ट फुकालेर हातमा घुमाउँदै बाइपासबाट चक्रपथसम्म कुदेर सबैलाई भन्दिऊँ जस्तो पनि लाग्यो । छाती बेतोडसँग धड्कियो । लाग्यो, ऊ फेरि ओखरपौवा पुग्नेछ भोलि, र केके हुनेछ केके ।
उसले ईश्वरलाललाई धन्यवाद दियो र काउन्टरतिरै दौडियो । त्यहाँका साथीभाइलाई समाचार सुनाइराखेर गोङ्गबुतिर लाग्यो । उसको दिमागमा कुनै सस्तो होटल हुनुपर्छ, त्यसबेला ।
भोलिपल्ट उज्यालो हुँदा मने माछापोखरी पुग्यो । त्रिशूली जाने पहिलो बस स्टेण्डमा खडा थियो । उसलाई चढिजौँ, हिँडिजौँ जस्तो त लाग्यो, तर पनि आफैँलाई सम्हाल्यो ।
दुई शताब्दीजस्तो लाग्ने दुई घण्टाको समयलाई सकसपूर्ण तरिकाले बिताएपछि ईश्वरलाल काउण्टरमा आइपुगे । मनेलाई देखेपछि उनले कसैलाई फोन गरे । सकसपूर्ण अर्को एक घण्टापछि त्रिशूली यातायातको एउटा नयाँ गाडी काउण्टरअगाडि आइपुग्यो । त्यसका चालकबाट साँचो र कागजपत्र मनेलाई दिँदै ईश्वरलालले भने, “आफ्नो ठानेर कुदाउनू । गाडी रहे भविष्य रहने हो । घुमाउरो बाटो छ, दुर्घटना भइरहन्छ ।”
“मैले त्यो बाटो राम्ररी बुझेको छु, सर् । म जतनसँग चलाउँछु गाडी ।”
मने एक पूर्ण चालकमा दर्रियो । उसले एउटा १६ वर्षको ठिटो सहचालक पनि पायो ।
छः महिनाको अन्तरालपछि मने पुनः ओखरपौवाको त्यसै बिसौनीमा पुग्यो । उत्तरतिरको घर र त्यसको बार्दली नियाल्यो । बार्दलीमा कोही थिएन । ऊ निराश भयो ।
गाडी गुडाउनु थियो, गुडायो । यात्रा त्रिशूलीतिरको थियो । त्यस बिसौनीमै चढेका एक जना यात्रुलाई उसले अस्ति आफ्नो गुरुले गरेजस्तै नजिकै राख्यो । कुराकानी चले ।
“अचेल ती बहिनी बार्दलीमा देखिन्नन् नि ।”
“कठैबरा । बार्दलीसम्म कसले ल्याइदियोस् !”
मने केही झस्कियो । जिज्ञासापूर्ण आँखाले ती यात्रुलाई हेर्यो ।
“पहिले उसकी दिदी थिई । बार्दलीमा ल्याउँथी, भित्र लान्थी । अस्ति असारमा त्यसको बिहे भयो, र घर गई । अब ती बूढा भएका बाबुआमाले सक्दैनन् । अचेल त भित्रै बसिरहन्छे ।”
मनेको मनभरि तुसारो परेजस्तो भयो । आँखाबाट नानी झरेर सडकमा पोखिएजस्तो, र आफैँले गुडाएको गाडीका पाङ्ग्राले किचिपिची पारिदिएजस्तो लाग्यो ।
“के भएको हो उनलाई?”
“पोलियो । घुँडामुनिको भाग चल्दैन । घुँडामाथि ठीक छ । हिँड्न सक्दिन ।”
मनेको एउटा सपना टुक्रियो ।
उसले ती यात्रुका सामु केही नभएजस्तो नाटक त गर्यो, तर उसको भित्री संसारमा महाभूकम्प आएको थियो । उसलाई क्वाँ गरेर कराइदिऊँजस्तो लाग्यो, चित्याऊँजस्तो लाग्यो र भीरबाट तल हाम्फालूँजस्तो लाग्यो । तर उसको हातमा एक गाडी यात्रुको जिन्दगी अडेको थियो । आफैँलाई सम्हाल्यो । गाडी त्रिशूली पुग्यो ।
भोलिपल्ट बिहानै यात्रु लिएर ऊ पुनः लाग्यो काठमाडौँतर्फ । ओखरपौवामा पुग्दासम्म उसको गाडीमा थोरै यात्रुमात्रै बाँकी थिए । उसले जानीजानी गाडीको गियरमा केही दखल लियो र ठूलो आवाज निकाल्यो । केहीबेर प्रयास गरेजस्तो गरेपछि उसले यात्रुलाई भन्यो, “यो गाडीको इन्जिनमा समस्या देखियो । केही समय लाग्लाजस्तो छ । तपाईंहरू अर्को गाडीमा जानू ल । म भन्दिन्छु । पैसा पर्दैन ।”
“मेरो आलुको बोरा छ पछाडि । हाल्नु, निकाल्नु — यो कस्तो झन्झट?” एउटी अधबैँसे महिला यात्रुले आक्रोष पोखिन् ।
“के गर्नु दिदी, गाडी बिग्रियो,” मनेले विनम्रतापूर्वक भन्यो ।
“दिदी, न झार्दिहाल्छु नि बोरा । अर्को गाडीमा पनि हाल्दिन्छु,” खलासीले भन्यो ।
“झार्दा, पछार्दा आधा आलु बिग्रन्छन् । पहिलो त, यो डाइबरको जातमा मलाई विश्वासै लाग्दैन । खलासीसँग त झन माया ममता केही हुँदैन ।”
अन्य यात्रु झरे । उनीहरूसँग विकल्प थिएन । ती झगडालु महिला केही बेर बर्बराइन् । केहीबेरमा त्रिशूली यातायातको अर्को बस आइपुग्यो । मनेका यात्रु त्यस गाडीमा गए । झगडालु महिला पनि झरिन् र लुरुक्क अर्को बसमा गएर बसिन् । मनेको सहचालकले उनको आलुको बोरा डिकीमा हाल्दियो ।
मने र उसको सहचालक ओखरपौवामै रहे । मनेले सहचालकलाई छेउमा बोलायो र भन्यो, “त्यो आइमाईले भनेको सुनिस्? चालक र सहचालकसँग माया ममता हुँदैन भनेर गई । यो कुरा मनमा राख्नू ।” सहचालकले शून्यभावमा मनेलाई हेरिरह्यो केहीबेर ।
मनेले भने केही बेर यताउती हेर्यो, र नजानिँदो पाराले आँखा उत्तरपट्टिको बार्दलीतिर घुमायो । लामो अन्तरालपछि ऊ आइपुगेको थियो यहाँ । उसका तिर्खाएका आँखालाई होसियारीका साथ घुमायो ताकि बिजुलीको कुनै आकश्मिक झट्काले ऊ घाइते नहोस् ।
बार्दलीमा कोही थिएन । मने गाडीबाट ओर्लियो र ड्याम्मै ढोका लगायो । ड्राइभरपट्टिको झ्याल पनि बन्द गर्यो । सहचालकलाई इशारा गर्यो, र उनी दुवै त्यसै नीलो चुना लगाएको घरतिर लागे ।
त्यहाँ के भयो, उनीहरूलाई मात्र थाह भयो । दुई दिनपछि मनेले आफ्नो पुरानो ड्राइभरलाई फोन गरेर भन्यो, “गुरु, मैले ओखरपौवाकी बहिनीसँग बिहे गरेँ । अब हामी यसै घरमा बस्छौँ ।”
निकै अक्मकिएको र केही आत्तिएको आवाजमा जवाफ आयो, “मने, तैँले थाह पाइनस्?”
“पाएँ । पाएरै गरेको ।”
“मने, सन्तान नहुन पनि सक्छन् तेरा । सन्तान त चाहिएलान् नि ।”
“गुरु, मलाई सन्तान चाहिएला नचाहिएला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर उसलाई मेरो साथ जरूर चाहिएको छ । ”
उत्तापट्टिबाट फोन काटियो ।
मनेले घर, बा, आमा, समाज सबै सम्झियो । पढेका, सुनेका कुरा पनि सम्झियो । तर अन्त्यमा ईश्वर सम्झियो र आफैँलाई धाप दियो ।
अचेल मने त्यसै नीलो चुना लाएको घरमा बस्छ । त्यो निर्दोष अनुहार पुनः बार्दलीमा निस्कन थालेको छ, र संसारको सौन्दर्य हेर्न थालेको छ । उसलाई सहयोग गर्न मनेले आफ्नी बहिनी पनि यसै घरमा ल्याएको छ । सडकमा भने उसले हेर्ने आँखा परिभाषित छन्, र ऊ पूर्ण वफादार छे ती आँखाहरूमा । केही केही कुरो काट्नेहरू उसलाई ‘घरज्वाइँ’ पनि भन्छन्, तर ऊ सन्दैन । आफैँलाई भन्छ, ‘मैले सुन्नुपर्ने अरु कुरा छन् । माथ्ला कुरा छन् ।’
मनेको गाडी गुडीबस्छ त्यसै सडकमा, र हरेक दुई दिनमा बास बस्न यसै ठाउँमा आइपुग्छ । हल्ला अर्को पनि चलेको छः अप्सरा आमा हुँदैछे । उसका बाआमाका पाको अनुहारमा पुनः गुराँस फुलेका छन् ।